Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Daryeelidda caafimaadka ee dalka Iswiidan / Daryeelka ilkaha
Dhammaan dadka Iswiidhan oo da'doodu ka yar tahay 21 sano waxay xaq u leeyihiin daryeel-ilkood oo lacag la'aan ah. Waana isku mid haddii ay tagaan daryeelka ilkaha dadweynaha iyo daryeelka ilkaha gaarka loo leeyahay. Xadka da'da oo lacag la'aanta lagu helaayo daryeelka ilkaha, waa ku kula duwan yihiin qeeybaha kala duwan ee dalka.
Dhammaan dadka ku nool dalka Iswiidan waxay xaq u leeyihiin in laga kaalmeeyo kharashka daryeelka ilkaha marka laga soo bilaabo sannadka ay gaaraan 23 sano. Kaalmada daryeelka ilkaha qaybna waa deeq (lacag) ay ku bixiyaan dakhtarka ilkaha, qaybna wa xadka sare ee kharashka daryeelka ilkaha.
Deeqda daryeelka ilkuhu waxa weeye 600 karoon sannadkii oo loogu talagalay dadka da'doodu u dhexeyso 23 ilaa 29 sano ama ka weyn 65 sano. Dadka da'doodu u dhexeyso 30 ilaa 64 sano waxaa la siinayaa deeq dhan 300 karoon sannadkii. Waxaad deeqda daryeelka ilkaha kaydsan kartaa sannad si aad u isticmaasho sannadka ku xiga.
Waxaa Folktandvården ka heleysaa daryeel ilko oo qiime go'an leh. Waxaana lagu magacaabaa daryeelka caafimaadka ilkaha. Waxaad bil walba bixineysaa qiime go'an. Kadibna waxaad u tegeysaa dakhtarka ilkaha adigoo aan waxba bixin. Si aad u hesho daryeelka caafimaadka ilkaha, waa in aad saxiixdaa heshiis. Markaasna waxaa khasab kugu noqoneysa in dakhtarka ilkuhu baaritaan kugu sameeyo si uu u qiimeeyo inta aad ku bixineyso daryeelka caafimaadka ilkaha.